Xaaska Luka Modrić oo hogaamineysa olalaha lagu doonayo inuu kula biiro Cristiano Ronaldo Horyaalka Talyaaniga. – Gool FM
Xaaska Luka Modrić oo hogaamineysa olalaha lagu doonayo inuu kula biiro Cristiano Ronaldo Horyaalka Talyaaniga.
(Real Madrid) 02 Agoosto 2018. Waxay u muuqataa in ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Croatia iyo kooxda Real Madrid ee Luka Modrić uu kasii socdo garoonka Santiago Bernabéu, sababa la xidhiidha xaaskiisa Vanja Bosnic.
Wargeyska “La Gazzetta dello Sport” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in xaaska xidiga khadka dhexe ee reer Croatia ee Vanja Bosnic ay xidhiidh la sameesay kooxda Inter Milan si ay ugu bandhigto adeega laacibka kooxda Real Madrid.
Luka Modrić ayaa la filayaa inuu isaga dhaqaaqi doono garoonka Santiago Bernabéu isla markaana uu kula midoobo saaxiibkiis hore kooxda Real Madrid Cristiano Ronaldo horyaalka dalka Talyaaniga, kaasoo inta lagu jiro suuqan xagaaga ugu biiray Juventus aduun dhan 100 milyan euro.
Maamulka kooxda Inter Milan ayaa waxay dhawaan xiiso balaaran kaga muujiyeen saxiixa laacibka ku soo guuleestay abaal marinta xidigii ugu fiicnaa koobka aduunka 2018 ee Luka Modrić.
Laakiin wararka ayaa waxay intaas kusii darayaan in ay jirto inaysan ahayn wax sahlan in ay kooxda Inter Milan la saxiixato Luka Modrić, xitaa hadii uu go’aansado inuu isaga dhaqaaqo garoonka Santiago Bernabéu, maadaama aysan maamulka kooxda u ogolaan doonin inuu ka dhaqaaqo kadib bandhigiisa wanaagsan uu ka sameeyay mudada 6 sano uu kooxda ku sugnaa.
Chelsea ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa inay dooneyso inay la saxiixato 32 jirkan la fahansan yahay inuusan dooneynin dib ugu laabashada horyaalka dalka England ee Premier League-ga, waxaana laga yaabaa inuu u dhaqaaqo Inter Milan hadii uu go’aansado inuu ka dhaqaaqo Real Madrid.
Bonucci oo ka gudbay tijaabada caafimaadka ee Juventus +SAWIRRO
Sanadihii hore wuxuu ahaa 31-ka Agoosto balse Sanadkan 9-ka ayaa loo soo raray...(Maxay tahay SABABTA isbadelka wayn loogu sameeyay waqtiga uu xirmayo Suuqa Premier League?)